Incubator | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana ny fomba fametrahana fitaovana fampidirana entana avy ao amin'ny latabatra? Fampiofanana video
Ny fiompiana poultry dia asa tena mahafinaritra. Ny fampidiran-tena manokana dia tena fitaovana tena ilaina ary koa ara-toekarena. Ny fitaovana famokarana fitaovana natao tamin'ny orinasa manokana dia fahafinaretana lafo, ary ireo izay te-hiteraka voly dia matetika tsy afaka mividy fitaovana toy izany.
Ny tombony sy ny tsy fahampian-tsakafon'ny Blitz, torolàlana ampiasaina amin'ny fitaovana
Androany, ho an'ny tantsaha manokana ho an'ny fiompiana biby, ny safidy amin'ny fampidirana fitaovana tsara sy azo antoka dia olana lehibe iray. Noho ny fiheveran'ny mpamboly ny fampiasam-bolany manokana, ny faniriany hahazo ny kalitao sy ny milina sarobidy dia azo takarina. Androany dia hiresaka momba ny iray amin'ireo fitaovana ireo - ny mpikatroka Blitz 72.
Ovoskop: Ahoana no fomba hanamorana ny atody?
Ny fijerena atody, alohan'ny fampidirana sy mandritra, dia dingana manan-danja amin'ny fikarakarana ny akoho. Ny mpanampy tsara amin'ity raharaha ity dia ovoscope - fitaovana iray ahafahana mamantatra ny fahavoazana, ny tsy fetezana, na ny fanaraha-maso ny fitomboan'ny embryon. Inona no atao hoe ovoscope? Ny Ovoskop dia singa manokana amin'ny fanampiana ny fanaraha-maso biolojika momba ny hatsaran'ny fanafody.
Azo atao ve ny manao ny thermostat ho an'ny mpampaka-bady (rafitra thermostat)
Tsy ho azo atao ny miteraka atody raha tsy misy ny toetry ny mari-pana. Ity dingana ity dia omen'ny thermostat manokana ho an'ny fifandimbiasana, izay mitazona ny haavon'ny ± 0,1 ° C, raha toa ka miovaova ny hafanana eo amin'ny 35 ka hatramin'ny 39 ° C. Ny fepetra takiana toy izany dia miompana amin'ny fitaovana nomerika maro sy ny fitaovana analoga.
Fomba fisafidianana thermostat ho an'ny fampidiran-dresaka, ny karazany sy ny modely malaza amin'ny fitaovana
Iray amin'ireo fomba fambolena malaza indrindra ankehitriny ny fambolena vorona. Izany dia noho ny fisian'ny habaka maimaim-poana sy ny fandaniam-bola tsy misy vidiny. Ny tena ilaina dia ny fanesorana ireo akoho kely sy ny fampiharana azy ireo. Azo atao izany na dia ao amin'ny trano fampiasa amin'ny fampiasana fampirimana mahazatra miaraka amin'ny thermostat.
Tena ilaina ve ny fiompiana biby any amin'ny toeram-panafody Cinderella?
Sarotra ho an'ny mpamboly maoderina iray miasa amin'ny fanangonam-borona tsy hanao an'io fitaovana fahagagana io toy ny mpikorisa. Ny mpampindram-bola dia masinina mahasoa sy azo itokisana izay ahafahanao mampitombo ny isan'ny tahiry tanora izay andrasanao, na inona na inona vanim-potoana. Ao amin'ny tsena maoderina dia misy modely maro, samy hafa amin'ny fahaiza-manao, ny asa aman-draharaha ary ny vidiny.
Maniry akoho ao anaty tabataba isika
Tena mahaliana ny atodikao atody ao an-trano, fa mampanahy ihany. Mba hahasambatra ara-pahasalamana, mahavariana, mamy amin'ny fotoana mety, dia tsy maintsy manaraka fitsipika maromaro izay hitanao ao amin'ny lahatsoratr'izy io ianao. Hamaritra amin'ny an-tsipiriany ny fizotran'ny akoholahy tioberkilao izahay, manomboka amin'ny fisafidianana sy ny fametrahana fitaovana ao amin'ny fitaovana, mamarana ny fahatsiarovana ny nahaterahan'ny vorona madinika efa ela.
Fomba hisafidianan-jaza ho an'ny atody: ny toetran'ny tsara indrindra
Ny fandrosoana ara-teknika dia tsy mitsahatra ary isan-taona dia mihabetsaka hatrany ny vokatra azo avy amin'ny tsena. Izany koa dia ampiharina amin'ny mpikorisa. Ny mpanamboatra dia manolotra tsy tapaka ny vokatra vaovao, mba hahafahan'izy ireo mametraka ny mpanjifa amin'ny asa sarotra amin'ny fisafidianana ny fitaovana tsara indrindra amin'ny atody. Andao hiezaka ny handinika ny tombony sy ny tsy fahampian'ny vokatra valo amin'ny vokatra mitovy amin'izany, izay mpitarika amin'ny fivarotana vondron'olona vokarintsika.
Fomba hisafidianana ny fampidirana ankavanana ho an'ny tokantrano
Ireo rehetra izay mieritreritra ny fiompiana biby goavam-be, aloha indrindra dia mihaino tsara ny "famolavolana". Ny fametrahana dia tsara, saingy miaraka amin'ny vondron'olona goavana toy izany dia tsy voamarina fa tsy ny akoho rehetra no mipetraka mangina ao anaty akanim-borona. Amin'izay tranga toy izany, ny singa manokana dia mety kokoa. Hitanay ny fomba hisafidianana mpampindram-bola azo antoka, mifototra amin'ny toetrany.
Ny fiasan'ny fikarakarana ny totozy rongony Ideal
Ao amin'ny efitrano fianarana maro, dia afaka maheno ilay hubbub tsy misy dikany izy: henom-bolo, akorandriaka, karazana gisa, ary fitaratry ny trondro. Mba tsy hividy vorona tanora isaky ny lohataona, ny tompona dia mahasoa kokoa ny maka ilay vorona ao amin'ny toeram-piompiany. Mba hanaovana izany, mila mividy fitaovana toy ny mpikorisa. Andeha hodinihintsika ny fandokoana "Ideal hen", izay novokarin'ny orinasa Novanibirsk "Bagan".
Ny fampiasana tranokala iray "Lay"
Ankehitriny, ny tsena anatiny dia manome karazana karazana mpikorisa marobe, na rosiana vita sy entana. Ny vorona fanavotana dia orinasa tompon'andraikitra izay mitaky fahalalana sy fitaovana mety. Araka ny filazan'ny tantsaha maro, tsy tokony hiezaka ny hividy ny mpampindram-bola vahiny, satria misy vokatra avy any ivelany izany.
Fijerena ny tabilao manerantany ho an'ny atody "Stimul-1000"
Ny tabilao iray natao ho an'ny atody maro dia mamela ny tantsaha mpamboly ho any amin'ny sehatra vaovao, azo antoka kokoa, ary ambony. Ny fampiasana fitaovana toy izany dia mamela ny hahazoana marary maro, fa manome antoka ihany koa ny fahasimbana mety sy noho izany, ny fidiram-bola tafahoatra. Ny solontenany avo lenta sy mahomby amin'ny karazana fitaovana toy izany dia ny "Stimul-1000".
Fomba entina manamboatra atody amin'ny tananao
Если вы являетесь владельцем приусадебного хозяйства, данная статья поможет вам в организации обогрева инкубатора. Вы узнаете, какие существуют нагревательные элементы, и какие модели являются наиболее эффективными. Hifantoka ihany koa amin'ny mpikorisa indraindray - torolalana amin'ny antsipiriany momba ny modely maro no hatolotra ny sainao.
Famerenana ny tabilao ho an'ny atody "Titan"
Mpamboly manana toeram-piompiana madinika, manatona tsara ny safidin'ny mpikorisa amin'ny fiompiana zana-trondro. Mandritra izany fotoana izany, dia omena ny saina ny rafitra, ny rivotra, ny hery ary ny hafa manan-danja amin'ny fitaovana. Eto ambany eto dia miresaka momba ny fampidiran-dresaka maoderina momba ny fampiasana ny marika "Titan".
Azonao atao ny mampisafotofoto ny fitaovana isan-karazany amin'ny fitaizana akoho, raha ny fahombiazan'ny orinasa mpihinana zava-maniry matetika dia miankina amin'ny vokatry ny fikarohana. Noho izany, ny fifantenana ny modely fanintelony, dia tokony hiantehitra amin'ny mpamatsy voaporofo, izay mamaly tsara ny olona izay niaina ny vokatrao.
Avereno vakiana ny atody ho an'ny atody "Remil 550TsD"
Ny Inkubator "Remil 550TsD" lava sy naharesy ny tsena teo amin'ny saha. Ity fitaovana ity dia ahafahanao mampifangaro ny atody maro be. Noho ny fiasa azo antoka amin'ny fitaovana entina miaro ny toetr'andro, ny Remil 550CD dia mitondra ny 95% amin'ny kitapo voalohany ho an'ny fifandonana.
Fanehoana an-tsary ny atody ho an'ny atody "Stimul IP-16"
Misy karazam-borona maro, toy ny, ohatra, ny fotsy hoditra mainty hoditra, izay mamihina ny andraikiny amin'ny maha-reny ary tsy te hanilika atody. Ny andrin-tsambo hafa dia miezaka ny manatanteraka amim-pahatokiana ny adidiny amin'ny ray aman-dreny, saingy manelingelina ny toe-javatra ivelany. Koa novolavolainy tamin'ny fomba ara-potoana ilay olona ary nampitombo ny isan'ny akoho izy, izay avo telo heny noho ny isan'ny olona eto ambonin'ny tany.
Fomba fijerin'ny tovovavy amin'ny atody "IFH 1000"
Ny fampidirana dia dingana sarotra, ny fahombiazan'izany dia miankina amin'ny antony maro. Ny fambolena izay miompana amin'ny fambolena vorona fambolena dia naharitra ela ary nampiasa fitaovana maoderina tamin'ny rafitra fanaraha-maso automatique misy ireo mari-pamantarana manan-danja ho an'ny embryos. Iray amin'ireo fitaovana ireo - ilay mpampionona "IFH 1000".
Ahoana ny fandroahana ny ratra tsy ara-dalàna alohan'ny hametrahana atody
Mba hahatonga ireo zana-bibikely matanjaka ao an-tranomaizina dia tokony ho voaomana tsara ny fitaovana. Ankoatra ny fampakarana ny mari-pana, ny fametrahana ny mari-pahaizana mety sy ny toy izany, alohan'ny fampiasana ny fitaovana, dia ilaina ny manao ny tsy fahampiana. Ahoana ary inona no atao hoe fanasitranana ny fandatsaham-bato, voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity.
Famaranana fananganana atody ho an'ny atody "Universal-55"
Iray amin'ireo fampidiran-drivotra mahazatra sy mahomby indrindra (eo amin'ny modely lehibe) ny Universal-55. Ny fahafaha-miasa dia ahafahanao maniry zazakely mamokatra sy salama betsaka. Ankoatr'izay, ny fikojakojana ny tobim-pamokarana mandritra ny asa dia tsy mitaky loharanom-bola maro, izay manangom-bola betsaka.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Incubator